Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Shiinaha | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Shiinaha
Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Shiinaha
written by warsan radio 12/02/2022
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Ciise Keyd Maxamuud, ayaa sheegay in aanay dawladda Shiinuhu u yeedhin karin dalkiisa cidda ay la yeelanayaan xidhiidh diblomaasiyadeed ka dib markii warbaahinta kula hadlay Twain.
Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland oo ku gudo jira booqasho rasmi ah oo wefti uu hoggaaminayey ay ku tageen Taiwan, waxa uu jawaab ka bixiyey dawladda Shiinaha oo naqdiday socdaalka ay ku tageen Magaalada Taipei ee dalka Taiwan.
Wasiir Ciise Keyd ayaa caddeeyey in Somaliland ay dal ahaan dhalatay iyadoo xor ah isla markaana ay xor u tahay cidda ay la yeelanayso iskaashi ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed.
Wasiirka Arrimaha dibaddu wuxuu intaas ku daray inay Somaliland la macaamilayso cid kasta oo xushmaysa madax-bannaanida dalkiisa oo doonaysa inay xidhiidh ganacsi yeeshaan iyadoo aan lagu xidhaynin wax shuruud ah.
Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Shiinaha was last modified: February 12th, 2022 by warsan radio
Dhageyso’- Barnaamijka Arimaha Bulshada Gaar Ahaan Waxbarashda
Dhageyso Warka Subaxnimo ee Idaacada Warsan
Taliyihii Booliska Magaalada Qardho oo la dilay